Warshadda Qalabka | Soo-saareyaasha Qalabka Shiinaha, Alaab-qeybiyeyaal
Ku Kala-goynta Sieving Solid-dareere ah inta badan waxa lagu daaweeyaa qashinka biyo ka badan 90%, waa nooc cusub oo qalab tayo sare leh oo inta badan loo isticmaalo in lagu sifeeyo digada sida doofaarka, lo'da, digaaga, idaha iyo dhamaan noocyada xoolaha waaweyn iyo kuwa dhexdhexaadka ah. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa fuuqbaxa qaddarka badan ee biyaha, sida haraaga digirta bean, iyo biyaha badan ee weelka khamriga.
Mashiinka Qalajinta ee Rotary Single Silinda waxaa si weyn loogu isticmaalaa in lagu qalajiyo qalabka warshadaha sida sibidhka, macdanta, dhismaha, kiimikada, cuntada, bacriminta isku dhafan, iwm.
Mashiinka meertada ah ee meeriska qaboojiyaha ah waa in loo qaabeeyaa loona istcimaalaa khadka wax soo saarka bacriminta ama khadka wax soo saarka ee bacriminta isku dhafan ee NPK si loo dhammeeyo geedi socodka soo saarista bacriminta oo dhameystiran. KuMashiinka Qaboojiyaha Xawaaraha badanaa waxay raacaan habka qalajinta si loo yareeyo qoyaanka loona kordhiyo xoogga qaybta iyadoo la yareeyo heerkulka walxaha.
Ku Multiple Hoppers Single Wsideed SDufan Dabiici ah & Iskujir ah Bacriminta Dufcadda Machiwaa badanaa waxay ku habboon tahay isku-darka, isku-dhafka iyo quudinta 3-8 nooc oo qalab ah. Nidaamka waxaa si otomaatig ah u xakameynaya miisaanka kumbuyuutarka. Qalabka pneumatic waxaa loo isticmaalaa in lagu xakameeyo qalabka ku jira qashinka. Maaddada waxaa lagu qasan yahay weelka qashinka lagu shubo waxaana si otomaatig ah u soo diraa alaab-qaadaha suunka.
Ku Cajaladda Vertical Isku qasid Quudiner Mashiin waxaa loo isticmaalaa in si siman loogu quudiyo alaabada ceeriin in ka badan laba qalab oo ku jira geedi socodka soo saarista bacriminta. Waxay leedahay astaamaha qaabdhismeedka is haysta, quudinta lebiska iyo muuqaalka quruxda badan. Waxa jira in ka badan laba dekedood oo laga sii daayo qaybta hoose ee saxanka, taas oo ka dhigaysa rarka soo dejinta mid ku habboon.
Ku Ku marooji Kala-soocid adag oo dareere ah waxaa loo isticmaalaa in laga quudiyo alaabada qashinka, sida digada xoolaha, haraaga cuntada, dhoobada, dareeraha haraaga noolaha IWM digaaga, lo'da, faraska iyo dhamaan noocyada beeraha degdega ah ee loogu talagalay saxarada xoolaha, kuwa wax kala siiya, dregs, starch dregs, suud dregs, geedka gowraca iyo urursiga kale ee kala-goynta bullaacadaha.
Mashiinkani ma xallin karo oo keliya dhibaatooyinka wasakhaynta wasakhaynta deegaanka, laakiin sidoo kale wuxuu soo saari karaa faa'iido dhaqaale oo sare.
Ku Qalabka Dufcadda Dabiiciga ah ee firfircoon guud ahaan wuxuu qaataa miisaanka elektiroonigga ah qalabka mitirka. Mashiinka ugu weyn waxaa lagu qalabeeyaa qalabka wax lagu hagaajin karo ee PID iyo shaqada qeylo dhaanta. Hal kuleyliye kastaa si otomaatig ah ayaa loo kontaroolaa si gooni gooni ah.
Mashiinka Mashiinka Baakadaha Labaad ee Labaad waxaa lagu dabaqayaa baakadaha tirada ee otomaatiga ah ee wax soo saarka bacriminta. Nidaamka miisaanka madaxbannaan oo leh saxnaan miisaan culus iyo xawaare dhakhso leh adoo adeegsanaya dareeraha miisaanka Toledo, habka miisaanka oo dhan waxaa si otomaatig ah u kontaroolaya kombuyuutarka.
Ku Mashiinka Xambaara Suumanka Suunka waxaa loo isticmaali karaa in lagu qaado alaabada waaweyn iyo alaabada dhammaatay. Waxaa sidoo kale lala shaqeyn karaa habab wax soo saar warshadeed oo kala duwan, waxayna sameeyn kartaa xariiq wax soo saar qaafiyad leh.
Ku La qaadan karo Mobile Bsidoo kale Conveyor waa mid fudud oo la qaadi karo, dhaqdhaqaaqa lagu dabaqi karo rarka jumlada, baakadaha gaadiidka iyo munaasabadaha kale, oo ku habboon munaasabadaha kala duwan, iyo dayactirka fudud.